Botswana: Kuenda-kunzvimbo yekuenda | Kuputsa Nhau dzekufamba
Location: musha » Kutumira » Kuputsa Kufamba Nhau » Botswana: Iyo yekuenda-kuenda kune safari
Botswana: Iyo yekuenda-kuenda kune safari
Ziva Usati Waenda
Pakufunga zororo resafa muBotswana, mumwe wemibvunzo yekutanga wakabvunzwa, "Zvakachengeteka here?" Travel.state.gov inokurudzira vashanyi kushandisa "zvakajairika" matanho ekufamba muBotswana. Izvi zvinoreva kuti nyika ine mhosva, sedzimwe nyika; zvisinei, vafambi vanowanzotadza kuona nharaunda yavo uye vanova vavariro. Iyo yakanaka pfungwa kungwarira nezve zvinokosha zvako uye nezvako, chero kwauri.
Nepo huwandu hukuru hwevashanyi vachifamba kuburikidza neBotswana sechikamu cheboka revashanyi (rinokurudzirwa zvakanyanya), vamwe vanotsvaga rusununguko rwekufamba vakazvimirira. Kana izvi zviri zvaunofarira uye uchironga kutyaira nemunyika iyi zvakakosha kuti uzive kuti Botswana ndeimwe yenyika gumi nenhatu dzekuruboshwe dzinotyaira muAfrica uye kuti mamiriro emigwagwa anogona kunetsa.
Iyo mikuru migwagwa (kazhinji nzira mbiri) inopa mamiriro anotyaira ekufambisa zvisinei, mapendekete ekudhonzwa kwekukurumidzira anogona kunge asingawanikwe uye akaremara mota nemarori anowanzo "batwa" pakati penzira. Mhuka, zvinomera, kunaya kwakanyanya, mwenje wakashata, marobhoti asingashande uye moto wemumugwagwa, zvinogona kukonzera kushomeka kwekuoneka uye kuvanza njodzi dzemumugwagwa.
Verenga nyaya yakazara pawaini.travel.
Tourism Revenue Kubuda Vanosvika, USD3.3billion inofungidzirwa nekupera kwegore
Wekare uye zvakare mukuru McDonalds: US Madhora haagamuchirwe